Wararkii ugu dambeeeyay Mas’uul lagu dhaawacay Gaalkacyo | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeeyay Mas’uul lagu dhaawacay Gaalkacyo
Wararkii ugu dambeeeyay Mas’uul lagu dhaawacay Gaalkacyo
Wararka laga helayo Magalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay halkaasi lagu dhaawacay guddoomiyaha Waxbarashada gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug.
Askari ka tirsan Ciidamada Maamulka Galmudug ayaa la sheegay in uu dhaawacay guddoomiyaha Waxbarashada gobolka Mudug ee maamulka Galmudug oo Magaciisa lagu soo koobay Axmed Qoodeeye, xilli uu ku sugnaa Koonfurta Magalada Gaalkacyo.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in askariga uu rasaas ku furay Mooto uu saarna guddoomiyaha, kadib markii uu ka shakiyey,isla markaana rasaastaas ay haleeshay guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Mudug.
Isbitaalka Weyn ee Magalada Gaalkacyo ayaa la geeyay dhaawaciisa si xaaladiisa caafimaad halkaasi loogu baxnaaniyo,waxaana wararku sheegayaa in dhaawiciisa uu yahay mid fudud.
Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada Galmudug ayaa waxaa ay sheegeen in askariga dhaawacay Guddoomiyaha ay gacanta ku dhigeen Ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug ee ku sugan Magalada Gaalkacyo,isla markaana baaritaano lagu haayo.
Previous articleDagaalka Wasiir Goodax iyo Puntland oo cirka isku shareeray
Next articleWasiir Goodax oo raligaliyay Puntland